Ogeysiiska sharciga | Bezzia
Bezzia waxaa iska leh shabakadda shabakadda Blog, shirkad leedahay AB Shabakadaha Internetka 2008 SL, CIF: B85537785, oo cinwaankiisu yahay C / Mirasierra 14-1 2º B, 28410 Manzanares el Real, Spain.
Webka iyo martigelinta: Websaydhku wuxuu leeyahay SSL TLS v.1.2 encryption kaas oo u oggolaanaya dirista xogta shakhsiga ah ee aaminka ah iyada oo loo marayo foomamka xiriirka caadiga ah, oo lagu marti galiyay server-yada AB Internet Networks 2008 SL ay qandaraas ka qaadatay Shabakadaha Occentus.
Foomamka ku-qoridda joornaalka: Shabakadaha Internetka ee AB 2008 XNUMX SL waxay adeegsataa adeegga gudbinta wargeysyada Sendgrid, Feedburner ama Mailchimp, kaasoo kaydiya xogta emaylkaaga, magacaaga iyo aqbalaadda rukumashada. Waad ka saamixi kartaa joornaalka wakhti kasta adoo adeegsanaya xiriirin gaar ah oo ku taal salka alaab kasta oo aad hesho
Bixiyeyaasha adeegga lacag-bixinta: Adoo adeegsanaya shabakada, waxaad ka heli kartaa, xiriiriyeyaasha, degellada websaydhka-saddexaad, sida PayPal o karbaash, si loo bixiyo lacag bixinta adeegyada ay bixiso AB Internet Networks 2008 SL. Marna shaqaaluhu AB Internet Networks 2008 SL shaqaaluhu maheli karaan faahfaahinta bangiga (tusaale ahaan, lambarka kaarka deynta) ee aad siiso dhinacyada saddexaad.
Ujeedo iyo sharciyeyn: Daaweynta ay AB Internet Networks 2008 SL ku fulin doonto xogta ku dhex jirta mid kasta oo ka mid ah shabakadaha kor lagu soo sheegay waxay noqon doontaa, ugu badnaan, mid ay shabakada bulshadu u oggoshahay astaamaha shirkadaha. Sidaas darteed, Shabakadaha Internetka ee AB 2008 XNUMX SL way la socodsiin kartaa, marka sharcigu uusan mamnuucin, taageerayaasheeda si kasta ha noqotee in shabakadda bulshadu u oggolaato waxqabadkeeda, soo bandhigiddeeda, dalabkeeda, iyo sidoo kale bixinta adeeg macmiil shaqsiyeed.
Baraha bulshada. AB Internet Networks 2008 SL waxay adeegsataa shabakadaha bulshada Mareykanka ee YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Flipboard oo loo gudbiyo xog caalami ah, oo ah falanqeyn iyo dabeecad farsamo la xiriirta websaydhka ku jira server-keeda. in AB Internet Networks 2008 SL ay daaweyso xogta iyaga, iyaga, adeegsadayaasha, macaamiisha ama badmaaxyaashu ugu gudbiyaan shirkadda AB Internet Networks 2008 SL ama ay la wadaagaan.
Macluumaadkaaga waa la ilaalinayaa iyadoo la raacayo siyaasadeena gaarka ah iyo nidaamka 'cookies'. Markaad dhaqaajiso rukunka ama aad bixiso macluumaadkaaga lacag bixinta, waad fahantay oo aad aqbashay qaan gaarkayaga iyo siyaasadaha cookies.
Waxaad had iyo jeer xaq u lahaan doontaa helitaanka, sixitaanka, tirtirka, xaddidaadda, qaadista iyo inaad iska ilowdo xogtaada.
Helitaanka iyo / ama adeegsiga websaydhkan waxay u egtahay qof kasta oo sameeya xaaladda isticmaalaha, aqbalida, laga bilaabo xilligan, si buuxda oo aan lahayn Boos, ogeysiiskan sharciga ah ee la xiriira adeegyada qaarkood iyo waxyaabaha ku jira bogga.
Markaad isticmaaleyso degelkan, isticmaaluhu wuxuu oggol yahay inuusan sameynin dhaqan kasta oo dhaawici kara sawirka, danaha iyo xuquuqda AB Internet Networks 2008 SL ama dhinacyada saddexaad ama dhaawici kara, gabin kara ama culeys ka saari kara bogga ama ka hortagi kara , si kastaba xaalku ha ahaadee, isticmaalka caadiga ah ee webka.
Waad arki kartaa dhammaan macluumaadka ku saabsan siyaasadayada cookies-ka ee xiriirka soo socda.
Nuxurka maqaallada lagu daabacay bogga lama tixgelin karo, sikastaba, ha u baddelo talo sharci.
Isticmaaluhu waa inuusan ku dhaqmin iyadoo lagu saleynayo macluumaadka ku jira bogga isagoon marka hore u adeegsan talobixin xirfadeed u dhiganta.
Iyada oo loo marayo Xaaladahaas Guud, ma jiro xuquuq aqooneed ama mid warshadeed oo loo wareejinayo bogga ama mid ka mid ah waxyaabaha ay ka kooban tahay, taranka, beddelka, qaybinta, isgaarsiinta dadweynaha, siinta dadweynaha, soo saarista, dib u isticmaalida, iyadoo si cad looga mamnuucayo Isticmaalaha. u gudbinta ama adeegsiga nooc kasta, qaab kasta ama habraac, midkoodna, marka laga reebo kiisaska ay sharci ahaan u oggoshahay ama u oggolaanayo qofka haysta xuquuqda u dhiganta.
Isticmaaluhu wuu ogyahay oo wuu oggol yahay in websaydhka oo dhan, oo ay ku jiraan laakiin aan dhammaystirnayn qoraalka, sawirrada, naqshadaha, softiweerka, waxyaabaha ay ka kooban yihiin (oo ay ku jiraan qaab-dhismeedka, xulashada, habeynta iyo soo bandhigidda isku mid ah), maqalka maqalka iyo muuqaallada, waxaa ilaaliya calaamadaha ganacsiga, xuquuqda daabacaadda iyo xuquuqda kale ee sharciga ah ee diiwaangashan, iyadoo la raacayo heshiisyada caalamiga ah ee Spain ay qayb ka tahay iyo xuquuqda kale ee hantida iyo sharciyada Spain.
Muuji waxyaabaha ay ilaalinayaan xuquuqda hantida aqooneed iyo meesha ay ku yaalliin goobta, aqoonsiga xuquuqda lahaanshaha aqooneed ee la tilmaamay iyo cadeyn cad oo ay daneyneyso mas'uul ka tahay run ahaanshaha macluumaadka lagu bixiyay ogeysiiska.
Isticmaalayaasha leh xaaladda macaamiisha ama adeegsadayaasha sida lagu qeexay qawaaniinta Isbaanishka ee degan Midowga Yurub, haddii ay dhibaato ku qabaan iibsiga khadka tooska ah ee laga sameeyay Shabakadaha Internetka ee AB ee 2008 SL, si ay isugu dayaan inay u gaaraan heshiis maxkamadda ka baxsan ayaa tegi kara ku Madasha Xalinta Khilaafaadka ee khadka tooska ah, oo ay abuureen Midowga Yurub ayna soo saareen Komishanka Yurub ee hoos imanaya Xeer (EU) 524/2013.
Helitaanka iyo / ama adeegsiga tan qof kasta oo sameeya xaaladda Isticmaalaha, aqbalida, laga bilaabo xilligan, si buuxda oo aan lahayn boos celin, ogeysiiskan sharciyeed, iyo sidoo kale xaaladaha gaarka ah ee, halka ay ku habboon tahay, ku dhammaystiraya, xiriirka adeegyada qaarkood iyo waxyaabaha ku jira bogga.
Isticmaalaha waa la ogeysiiyey, wuuna aqbalay, in marin u helka degelkan uusan macnaheedu ahayn, sinnaba, bilowga xiriirka ganacsi ee AB Internet Networks 2008 SL. Sidan oo kale, isticmaaluhu wuxuu oggol yahay inuu adeegsado websaydhka, adeegyadiisa iyo waxyaabaha ku jira isaga oo aan ku xadgudbin sharciga hadda jira, iimaanka wanaagsan iyo nidaamka bulshada. Isticmaalka websaydhka ujeeddooyin sharci darro ah ama waxyeelo leh, ama in, si kasta oo ay tahayba, ay u geysan karto waxyeello ama looga hortago howlaha caadiga ah ee bogga waa mamnuuc. Ku saabsan waxyaabaha ku jira degelkan, waa mamnuuc:
Waad sameyn kartaa jimicsi, iyadoo la tixraacayo xogta la soo ururiyay, xuquuqda lagu aqoonsan yahay Sharciga Dhaqanka 15/1999, ee marin u helista, hagaajinta ama baabiinta xogta iyo mucaaradka. Sababtaas awgeed waxaan kugu wargalinayaa inaad awood u yeelan karto inaad ku isticmaasho xuquuqdan adoo adeegsanaya codsi qoraal ah oo saxeexan oo aad u soo diri karto, oo ay la socdaan koobi aqoonsi ah ama dukumiinti aqoonsi oo u dhigma, cinwaanka boostada ee Shabakadaha Internetka ee AB Internet 2008 10 SL ama iimayl, kuna lifaaqan koobi aqoonsi ah: xiriir (at) actualityblog (dot) com. XNUMX maalmood ka hor waxaan ka jawaabi doonnaa codsigaaga si aan u xaqiijino fulinta xaquuqda aad codsatay inaad fuliso.
Iyadoo la raacayo sharciga hadda jira, AB Internet Networks 2008 SL ma fuliso dhaqamada SPAM, sidaa darteed ma dirto emayl ganacsi oo aan horey loo weydiisan ama loo oggolaan isticmaalaha. Sidaas darteed, mid kasta oo ka mid ah foomamka ku jira shabakadda, Isticmaaluhu wuxuu fursad u leeyahay inuu siiyo oggolaanshahooda cad ee uu ku helayo Warsidaheenna / Dacwadda, iyada oo aan loo eegin macluumaadka ganacsi ee waqtiga la codsaday.